Taurus ဘယ်သူနဲ့လက်ထပ်သင့်သလဲ - Oscရာဝတီ
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - မေ ၁၀ ရက်မွေးနေ့ Horoscope
အတူသဟဇာတဆုံးအရိပ်လက္ခဏာကယေဘုယျအားဖြင့် Cancer, Virgo, Capricorn နှင့် Pisces ဖြစ်သည်။ နှင့်အတူအနည်းဆုံးသဟဇာတနိမိတ်လက္ခဏာများကယေဘုယျအားဖြင့်လီယိုနှင့်ရေကူးသမားများဖြစ်သည်။ နေဆိုင်းဘုတ်များနှိုင်းယှဉ်လုပ်နိုင်လိုက်ဖက်တဲ့၏ကောင်းတစ် ဦး ယေဘုယျစိတ်ကူးပေးပါ။
သားရဲဇုန်၏ဆန်းကြယ်မှုများဘက်သို့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံကြိုဆိုပါသည်။ ငါတို့itsာသို့ကြည့်ရှုသည့်နေရာသည်၎င်းကိုသိပ္ပံဆိုင်ရာအသိပညာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလန်းဆန်းစေသည်။ သင်၏ဆက်ဆံရေး၊ ချစ်လှစွာသော Beast-Viewer နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းအချို့သင်၌ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပြီး၊ ယနေ့သည်သင်၏ကြယ်များနှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘယ်သူကိုသင်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သလဲ။ မည်သူနှင့်ဝေးဝေးနေသင့်သနည်း၊ သင်ကြိုးစားသမျှအတိုင်းကြိုးစား။ မည်သည့်အခါမျှသင်၏မိတ်ဆွေစစ်မဖြစ်နိုင်သောအခြားရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာများကိုပြသပါမည်။ ဆက်ကြည့်ပြီးငါတို့ရှာပါလိမ့်မယ်။ စကြ ၀ youာသည်သင်လိုချင်သောအဖြေကိုမပေးမီ၊ သင်သည် subscribe ကိုနှိပ်ပြီးသတိပြုရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ခုကိုလက်လွတ်မခံပါ။ ဤဆောင်းပါးကိုအဆုံးတိုင်အောင်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ channel ကိုထောက်ပံ့ရန်မမေ့ပါနှင့်။
Aries // မီး မင်းကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကိုနှစ်သက်ပြီးနံပါတ် ၁ ကိုအမြဲတမ်းသတိထားနေတယ်။ မီးသင်္ကေတအနေနဲ့မင်းဟာအလွန်တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်တယ်။
ကောင်းမွန်စွာအခြေပြုပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည့် Taurus တစ်ယောက်နှင့်သင်ရှိနေစဉ်သင်အနည်းငယ်စိတ်မရှည်နိုင်၊ Taurus သည်ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေသည့်အခါဆက်ဆံရေးကိုမကြာခဏအဆုံးသတ်တတ်သည်ဟုလူသိများပြီးသူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်အလျှော့မပေးနိုင်ပါ။ သင်တို့အဘို့, ကင်ဆာရောဂါလည်းခက်ခဲခင်မင်ရင်းနှီးနိုင်ပါတယ်။
Taurus // EARTH Taurus, မင်းကအလှတရားနဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းတွေဝိုင်းရံထားတာကိုနှစ်သက်တယ်။ သင်လိုချင်တာကိုသိပြီး၎င်းနှင့်ကပ်ပါ။ သင်ဟာတကယ့်ကိုလက်တွေ့ကျပြီးသစ္စာရှိမိတ်ဆွေတစ် ဦး ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အံ့သြဖွယ်အရည်အသွေးရှိပါတယ်။
သို့သော်သင်၏ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ မတည်ငြိမ်သောအမွှာသည်သင်ရှောင်ရှားလိုသူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်။ Taurus သည်ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ Gemini သည်သူ၏စိတ်ကိုပုံမှန်ပြောင်းလဲသွားသည်ဟုထင်မှတ်နေသော Zodiac လက္ခဏာရှိသည်။ ငါတို့ချစ်သော Taurus, ငါတို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, သင်ဖြစ်ကောင်းတစ် ဦး Aries နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအချိန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
GEMINI // AIR Gemini၊ မင်းဟာသိချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ သငျသညျလျင်မြန်စွာ - လိမ္မာနှင့်အလွန်လူမှုရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ကြသည်။ သင်ဟာအမြဲတမ်းပျော်စရာအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများပေမယ့်လည်းသင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော်တော်လေးငြိမ်သက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ Zeitge Virgo သည်သင့်အတွက်အခက်တွေ့လိမ့်မည်။
Virgo ၏ရှေးရိုးစွဲသဘောသဘာဝသည် Gemini ၏စရိုက်လက္ခဏာနှင့်မကိုက်ညီပါ။ Gemini ရှင်သန်နိုင်သည့်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးကိုမဆိုဖယ်ထုတ်ပစ်လိမ့်မည်။ ဒီဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုစလုံးဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ ဒါကြောင့်ပconflictိပက္ခဖြစ်ဖြစ်၊ ရန်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်စေ၊ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဆီသို့ ဦး တည်တဲ့နိမိတ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ CANCER // WATER Cancer သင်ဟာရာသီဥတုအပြောင်းအလဲအတွက်စိတ်ခံစားမှုအရှိဆုံးလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်။
သင်သည်သင်၏အတွင်းစိတ်ကိုကောင်းစွာညှိနှိုင်းပြီးသဘာဝမိတ်ဆွေကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ နားရွက်ရှိရန်နှင့်တစ်ယောက်ယောက်ကငိုရန်ပခုံးဖြစ်ရန်အမြဲအသင့်ရှိပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းကအရမ်းသစ္စာရှိလို့မင်းရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့သူကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး။
Sagittarius ဟာသူတို့လိုချင်တာကိုရဖို့ဘာမှမပြောဆိုတာလူသိများတယ်။ Sagittarius သည်မီးသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်နှင့်တိုက်ရိုက်ပwillိပက္ခဖြစ်နိုင်သည်။ ကင်ဆာရောဂါသည်မိမိကိုချစ်သောသူများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအိမ်တစ်လုံးနှင့်ဝန်းရံရန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Sagittarius သည် LEO // FIRE Lions များကိုအမြဲတမ်းလိုအပ်နေကြောင်းအမြဲတမ်းတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖြစ်ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုမကြာခဏအောင်မြင်ကြသည်။
လီယိုစသည်တို့သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗဟိုပြုသည်ဟုလူသိများသည်။ ရေရှည်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လီယိုသည်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏မာနကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ပါ ၀ င်ရန်ရုန်းကန်နိုင်သည်။ Pisces zodiac သင်္ကေတအောက်မှာရှိသူတွေနဲ့သင်ဆက်သွယ်တဲ့အခါသတိထားပါ။ Pisces ကိုရေဒြပ်စင်ကထိန်းချုပ်ပြီး Leo ကိုမင်းကမီးဖြင့်အုပ်ချုပ်တယ်။
ရေနှင့်မီးသည်မရောနှောပါနှင့်။ Pisces တွေဟာ passive and sensitive နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်တို့၏ရဲရင့်ခြင်းကသူတို့ရဲ့အာရုံကြောတွေပေါ်မှာရောက်နိုင်ပါတယ်။ VIRGIN // EARTH Virgo, မင်းကရာသီဥတုအပြောင်းအလဲအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်နိူင်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကစားရန်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်အချိန်အနည်းငယ်ပေးသည်။ မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်အခက်တွေ့နေသော်လည်းသင်နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့လျှင်သင်အလွန်ကြင်နာပြီးသစ္စာစောင့်သိသောကြောင့်အပျိုကညာကိုမကြာခဏနားလည်မှုလွဲတတ်သည်။
သင်သည်မြင့်မားသောအသိဉာဏ်ရှိပြီးချစ်ခင်ရပါသောအပျိုကညာဖြစ်ပြီး၊ မြင့်မားသောအသိဉာဏ်ရှိသူ Aquarius နှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်အငြင်းအခုံဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာ Virgo၊ Aquarius လူတွေရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်ကာလတစ်ခုတည်းအတွက်သာတောင့်တခဲ့ပြီးပါကတစ်ခါတစ်ရံဒေါသထွက်နိုင်သည် // AIR Ah, Libra ။ သံတမန်ရေးရာ။
သင်မည်သူမဆိုနှင့်အတူရနိုင်ပုံရသည်! သို့သော်ထိုသို့အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါ။ Libra, သင်ကရာသီခွင်တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အမျှတဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်လူသိများသည်, သို့သော်သင်ကအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ပရိသတ်မဟုတ်ပါ။ Keyword, ကင်းမြီးကောက်။
Scorpios များသည်အလွန်သြဇာရှိကြောင်းလူသိများပြီးမကြာခဏစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ဘဝများကို ဦး ဆောင်သည်။ Scorpios များသည်တစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည်ဟုလူသိများပြီး Libra သည်ဤအပြုအမူများကိုသည်းမခံပါ။ SCORPIO // WATER S corpio၊ သင်သည်ပျော်စရာကောင်းပြီးအသည်းအသန်ရှိသည်။ သင်၏ခံစားချက်များကိုမည်သို့ဖော်ပြရမည်ကိုသင်သိပြီးမိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျမကြာခဏအလွန်ဖန်တီးမှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်သင်ကအာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုနှင့်ပါတီ၏ဘဝဖြစ်လို။ ခင်ဗျားဟာလီယိုနဲ့တကယ်ဆင်တူတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုနဲ့ခင်ဗျားတို့တိုက်မိနိုင်တယ်ဆိုတာနားလည်တယ်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အလွန်စိတ်ပါ ၀ င်စားသောဇာတ်ကောင်များဖြစ်ကြပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်ခေါင်းမာကြသည်။
ဤတူညီမှုများသည်တခါတရံစစ်မှန်သောခင်မင်မှုကိုဆိုလိုနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းနှစ်ခုစလုံးအတွက်အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ Sagittarius // FIRE သင်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော Sagittarius ဖြစ်သည်။ သငျသညျသဘာဝစူးစမ်းနှင့်လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ကိုချစ်။
မင်းကတခြားဘယ်သူမှမလိုလွတ်လပ်မှုကိုလိုချင်တောင့်တသည်။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်အမြဲတမ်းအဆင်မပြေနိုင်သည့်ရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာသည်ကင်ဆာလက္ခဏာများအောက်တွင်ရှိနေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကင်ဆာသည်ခင်မင်မှုတွင်တွယ်ကပ်နေတတ်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရမှုလည်းမရှိပေ။
နည်းနည်းလေးနဲ့ခြေချင်းသံကြိုးနဲ့သင် Sagittarius ဟာနောက်တစ်ခါပြန်လာ ဦး မှာပါ။ CAPRICORN // EARTH Capricorn မင်းဟာဆင်ခြင်တုံတရားရဲ့အသံပဲ၊ မင်းကတာ ၀ န်ယူတယ်၊ စည်းကမ်းကျတယ်။ ပြီးတော့သင်ဟာချုပ်တည်းမှုအနုပညာကိုကျွမ်းကျင်တယ်။ သင်အလွန်လွတ်လပ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံမိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်အခက်တွေ့တတ်သည်။
သင်ဟာအတွေ့အကြုံကနေသင်ယူချင်ပေမဲ့တစ်ခါတစ်ရံတွင် Libra ၏နိမိတ်လက္ခဏာအောက်ရှိသူများသည်သည်းမခံနိုင်သည့်အရာကိုအနည်းငယ်သာသိပြီးသင်ကြုံတွေ့နိုင်သည်။ သင်နှစ် ဦး စလုံးသည်အလွန်ခေါင်းဆောင်မှုရှိသော်လည်း Libra သည်လူမှုရေးအရအလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ AQUARIUS // AIR Aquarius သင်ဟာအလွန်ထူးဆန်းပြီးကောင်းမွန်သောရန်ပွဲကိုတကယ်တိုက်ထုတ်သည်။
အမွှာကဲ့သို့မပြင်းထန်ပါ၊ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သင်ရှိသည်။ ရှက်ပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်သော်လည်းအလွန်စိတ်လှုပ်ရှား။ အားတက်သည်။ မင်းဟာဒင်္ဂါးရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးဘယ်အခြေအနေမျိုးကိုမဆိုငြိမ်းချမ်းရေးပေးနိုင်တယ်။ သို့သော် Aquarius သည်အနည်းငယ်သာဝေးကွာပြီးတာဝန်နှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းထားသည့် Capricorn ကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ဤနေရာနှင့်ယခုကြုံတွေ့ခံစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
သင် Pisces နှင့်အမြဲတမ်းအဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပါ။ သင်ကဲ့သို့သောရေနေသတ္တဝါသည်၎င်းတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာတွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင့်အားအနည်းငယ်ပြန်အအေးမိစေလိမ့်မည်။ FISH // WATER မင်းဟာတီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့အနုပညာလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင်သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးသင်၏ခံစားချက်နှင့်အလွန်ကိုက်ညီသည်။
သငျသညျအလွန်ကြင်နာခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်အတော်လေးကြိုးဖြစ်ကြောင်းလူသိများကြသည်။ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်စိတ်ကူးကောင်းအရည်အသွေးနှစ်ခုလုံး။ သင်မဖြေရှင်းနိုင်သောအရိပ်လက္ခဏာများမရှိသော်လည်း၊ အမွှာများသည်တစ်ခါတစ်ရံသင့်အတွက်အလွန်အမင်းများလွန်းနေနိုင်သည်၊ သက်တမ်းပိုကြီးသောအမွှာများအတွက်မသက်မသာဖြစ်ခြင်းနှင့်အမျှအမွှာသည်သင့်ကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည် မင်းဘယ်သူလဲ
ယခုမှာဤချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောသားရဲကြည့်ရှုသူအားလုံးသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စကြဝosာတစ်ခုလုံးရှိသည်ဟုထင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနားယူရန်အချိန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော် ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လာပြီးကြယ်များထံမှအနာဂတ်မေးခွန်းများမေးပါ။ ဒီဆောင်းပါးကသင်၏ဆက်ဆံရေးကိုအပြည့်အဝဖော်ပြခဲ့သလား။ သို့မဟုတ်သင်၌ဤစာရင်းရှိအရာအားလုံးကိုဖောက်ဖျက်သောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပါသလား။ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကဘယ်နိမိတ်လက္ခဏာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ!
မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
အဆိုပါ Taurusမေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်thလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီးဖြားယောင်းသွေးဆောင်သော်လည်းကြင်နာတတ်သူဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Taurus လိုအပ်သည့်အခါလျှို့ဝှက်ကျန်ရှိနေသောမှာအလွန်ကြီးပေမယ့်အချိန်များတွင်လုံးဝပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်း။ ရိုးသားမှုနှင့်သစ္စာရှိမှုလိုအပ်ချက်ကိုဟန်ချက်ညီစေရန် Taurus ရရှိထားသောစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။8 2018 ။
သင်မွေးဖွားသည့်လကသင့်အကြောင်းကိုဖော်ပြသည့်အရာများကအပြန်အလှန်ဖော်ပြသည့်အချက်အလက်များဇန်နဝါရီလတွင်မွေးဖွားသောဇန်နဝါရီလကလေးများသည်ကြီးပြင်းလာသောအခါဇန်န ၀ ါရီလတွင်မွေးဖွားသောအခါရည်မှန်းချက်ကြီးသူများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အခြားသူများနှင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အကြောင်းဇန်နဝါရီလကလေးငယ်များသည်လည်းသူချင်းလူသားများကိုသင်ကြားပေးရန်နှင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်တိုးတက်စေရန်ကူညီရန်အလွန်ပြင်းပြသောဆန္ဒရှိသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီမှာမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအနုပညာနဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတတ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံပုန်ကန်တတ်ကြတယ်။ ကောင်းတာတစ်ခုကတော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စရိုက်နဲ့တကယ်ထိတွေ့နေပြီးဖေဖော်ဝါရီလကကလေးတွေကိုရန်လိုတတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်၊ လူတွေတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အထိခိုက်မခံတဲ့ဘက်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်မတ်လတွင်မွေးဖွားလာပါကအခြားသူများထက် ပို၍ ရှက်ရန်ဖြစ်ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုကောင်းစွာသိကျွမ်းသည်အထိသင်၏စရိုက်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းကိုများသောအားဖြင့်စဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ မတ်လကလေးငယ်များသည်လူတိုင်းနီးပါးကိုနှစ်သက်ကြသည်။ မတ်လမွေးဖွားသောမတ်လကလေးများသည်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရကြသည်။ မှန်သည်။ ယုံကြည်မှုပြတ်တောက်သည်အထိအလောင်းအစားများအားလုံးပျက်ကွက်သည်။ Aprilပြီလbabပြီလကကလေးများသည်အားကစားသမားများဖြစ်ကြပြီး,ပြီလတွင်မွေးဖွားသောသူများသည်ဂရုပြုမှုကိုနှစ်သက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေကြသည်။
သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့နောက် adrenaline အလုအယက်ရှာဖွေနေကြလို့အမြဲတမ်းအလျင်အမြန်ပြေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Aprilပြီလကလေးတွေကများသောအားဖြင့်အိပ်ရာအာလူးများမဟုတ်ကြဘူး၊ Aprilပြီလမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းဘဝမှာမင်းဟာလုပ်စရာတွေ၊ မေလတွင်မွေးဖွားခဲ့ကြသူများစွာသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိရန်၊ သူတို့၏ဘယ်ဘက် ဦး နှောက်ကိုသူတို့၏ညာဘက် ဦး နှောက်ထက် ပို၍ အသုံးပြုကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်နံပါတ်များနှင့်အချက်အလက်များထက် ပို၍ အိပ်ရာဝင်သည်။ အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်အိပ်မက်မက်ခြင်းနှင့်သူတို့၏အိပ်မက်များမက်ခြင်းတို့အတွက်ပျော်ရွှင်ရန်ဖြစ်သည် မင်းမေမေမွေးဖွားလာတဲ့အနာဂတ်ဟာနေ့ခင်းဘက်မှာယုတ္တိဗေဒကိုသုံးပြီးညမှာကြီးမားတဲ့အိပ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့တယ်။ ဇွန်လဇွန်လကလေးငယ်များသည်အလွန်စိတ်ထိခိုက်လွယ်ကြသည်။ ၎င်းသည်ဇွန်လတွင်မွေးဖွားလာသူတစ် ဦး ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်အလွန်ယဉ်ကျေးသောဇွန်လကလေးငယ်များဖြစ်သောကြောင့်စကားမပြောနိုင်ပါ၊ လူတွေဟာမကြာခဏသူတို့စကားကိုနားထောင်ပြီးသူတို့အကြံဥာဏ်ကိုအလေးအနက်ထားတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ဇွန်လကလေးဖြစ်ပါကသင်သည်အခြားသူတစ် ဦး ကဲ့သို့တူညီသောအရာမျိုးကိုနှစ်သက်လိုလျှင်၊ အခြားသူများကိုစွန့်ခွာရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါက၊ သင်ဇူလိုင်လတွင်မွေးဖွားလာပါကသင်သည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသူဖြစ်ပါက၊ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောရတာပျော်စရာကောင်းတာပေါ့။ မင်းရဲ့မီးလောင်ရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုတွေ့ပြီးသူတို့ကိုမင်းနဲ့အချိန်ပေးအောင်လုပ်တာဟာမင်းကိုလူနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပေးတဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ခုခုပြောပါ။ သြဂုတ်လပြန်လာမယ့်ဟာသဉာဏ်ရှိသောပြန်လာခြင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပဲ သူတို့ကရယ်မောရတာကိုနှစ်သက်ကြပြီးတခြားသူတွေကိုရယ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာသတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ သူတို့ကဒီဟာသကိုသုံးတယ်။ သင်သြဂုတ်လတွင်မွေးဖွားခဲ့လျှင်မင်းသည်သဘာဝမွေးဖွားသောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်။ စက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားလာပါကစက်တင်ဘာလကလေးများသည်အလွန်အသေးစိတ်ရည်ရွယ်ထားသည်။ သင်သည်ပြီးပြည့်စုံလင်သူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်။ အစဉ်အမြဲအရာရာတိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်။ စီးပွားရေးရှိသူများအပြင်စက်တင်ဘာလမှသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှပါမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ကလေးငယ်များသည်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အသေးစိတ်အတွက်အလွန်မျှော်လင့်ချက်ကြီးမားစွာရှိသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကပျက်လျှင်စက်တင်ဘာအားအလျင်အမြန်ဝေဖန်ခံရလိမ့်မည်။ အောက်တိုဘာအောက်တိုဘာကလေးများသည်အလွန်ပေါ့ပါး။ စိတ်မပါ ၀ င်စားသူများဖြစ်ကြသည်။ စက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားလာသောအခါသင်သည်တောက်ပသောဘက်ကိုကြည့်လေ့ရှိသည်။ ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့မျက်နှာကိုချက်ချင်းမမြင်နိုင်ဘူး။ ပြီးရင်အောက်တိုဘာလမှာမွေးလာတဲ့လူအများဟာသူတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလှပပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်တိုဘာကလေးတွေကပျော်စရာကောင်းပြီးစကားပြောတတ်ကြလို့သူတို့အတွက်လွယ်ကူစေတယ် နို ၀ င်ဘာလတွင်မိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်၊ အကယ်၍ သင်သည်နိုဝင်ဘာလတွင်မွေးဖွားပါကသင်၏မွေးဖွားမှုကသင့်အကြောင်းပြောပြနိုင်သည့်အရာများရှိသည်။ နိုဝင်ဘာကလေးငယ်ကိုတကယ်အာရုံစူးစိုက်သောအခါနိုဝင်ဘာကလေးငယ်များသည်အလွန်ခေါင်းမာပြီးအလွန်လျှို့ဝှက်တတ်ကြသည်။ နို ၀ င်ဘာလသည်သင်သည်အလွန်လိမ္မာပါးနပ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်သောနိုဝင်ဘာကလေးများဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် ဤသူများသည်မပျော်ရွှင်ကြပါ။ သူတို့အားလုံးလုပ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ အကယ်၍ သင်သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်မွေးဖွားလာပါကသင်ကြီးပြင်းနိုင်သည်။ ဒီဇင်ဘာဖြစ်ချင်မှသာလျှင်ကလေးများသည်ပျော်စရာကောင်းပြီး၎င်းတို့သည်ကလေးဘ ၀ တွင်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုဖြစ်လိုကြသည် သငျသညျဒီဇင်ဘာလ၌မွေးဖွားခဲ့လျှင်သင်သည်အိမ်မှာအလွန်တက်ကြွစွာဖြစ်ကောင်းသင်၏လက်ဖက်ရည်ဖလားမဟုတ်သောတီဗီကိုကြည့်လျှင်ဒီဇင်ဘာလကလေးငယ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့အလွန်ဂုဏ်ယူဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကသူတို့ကိုဖြစ်ချင်ကြဘူးလူများအပြည့်အဝအခန်းထဲမှာသူမအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သည် သူတို့ကတစ်ခုခုကြောင့်အတားအဆီးဖြစ်စေသည့်အခါတွင်မည်သည့်အရာကမှမတားဆီးနိုင်ပါက၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရန်ပြproblemနာမရှိပါ။
ရာသီဥတုအချို့ဆိုင်းဘုတ်များအများဆုံးဖြစ်ကြသည်Taurus နှင့်သဟဇာတPisces, Cancer, Virgo နှင့် Capricorn တို့ဖြစ်သည်။၉ ။ 2019 ။
ဒီအားလပ်ရက်လတွေမှာအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရသလား။ လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ယခုနှစ်အခြေအနေအောက်တွင်ပုံမှန်ထက်ပိုမို။
မင်း BFF ရှိလား။ များသောအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်ဆုံးသောသူများသည်သင်၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများဖြစ်လာကြလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံး BFF အကြောင်းသင့်ရဲ့ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာအတိုင်းပြောကြပါစို့။ ဘယ်သူနဲ့တွဲဆွဲဖို့အကောင်းဆုံးလဲ။ စကားပြောနေတာရယ်စရာဘယ်သူလဲ။ ဘယ်သူလဲ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အရာတွေအကြောင်းပြောနေတာပါ ...
Aries သည်မီးသင်္ကေတတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည် Leo နှင့် Sagittarius ကဲ့သို့သောအခြားမီးသင်္ကေတများနှင့်သဘာဝကျကျဆက်စပ်လိမ့်မည်။ Aries သည်အသည်းအသန်လှုံ့ဆော်သည်။ သင့်မှာစျေးနှုန်းကိုစိတ်ထဲထားပြီးရှည်လျားစွာသွားလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ၊ ထူထဲပိန်ပိန်ပိန်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဆီရောက်ရင်မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးလောင်းကြေးကတော့ Libra ဖြစ်သည်။ Libra အတော်လေးဖော်ရွေများနှင့်ယဉ်ကျေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်၌တူညီသောအရာများစွာရှိသည်ဟုမထင်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်သင်၏မိတ်ဆွေဖြစ်မှုကိုထူးခြားစေသည်။
သင်တို့နှစ် ဦး သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများစွာနှင့် ပတ်သက်၍ ခင်မင်ရင်းနှီးသောအငြင်းပွားမှုများရှိလိမ့်မည်။ အစားအစာကနေအားကစား၊ ဖျော်ဖြေရေးအထိနိုင်ငံရေးမှာမင်းရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုစိန်ခေါ်သူတစ်ယောက်ကိုမင်းကိုလိုချင်တယ် သင်နှင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အငြင်းပွားစရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာအဘယ်နည်း။ နည်းနည်းပူလွန်းသလား သူငယ်ချင်းဖြစ်နေသေးလား မှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်ရပ်ပြီးသားရဲအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်စကားစပါ။
Taurus, ဒီဗီးနပ်စ်အုပ်ချုပ်ကမ္ဘာမြေနိမိတ်လက္ခဏာကိုမစ်ရှင်မှ၎င်း၏ဆည်းကပ်သောကြောင့်လူသိများသည်။ BFFs နှင့် Taurus သည် Scorpio အတွက်အသင့်တော်ဆုံးပွဲဖြစ်သည်။ Aries-Libra ဆက်ဆံရေးနဲ့တူတူပဲ၊ မင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာမတူညီတဲ့မျက်နှာစာတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်လိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်အဲဒါကခင်ဗျားရဲ့ခင်မင်မှုအတွက်ကောင်းပါတယ် သင်ကြီးပွားနိုင်သည်။ တူညီမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်တို့နှစ်ယောက်သည်ခေါင်းမာတတ်သည်။
သို့သော်မျှော်လင့်ရန်အခြားအရာတစ်ခုရှိသည်။ Scorpio ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတစ်ခုမှာသူတို့၏သစ္စာရှိမှုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အဆိုးဆုံးအချိန်၌ပင်သင်တို့နှင့်အတူရှိနေပါလိမ့်မည်။
Gemini Gemini ဖြစ်ခြင်းမှကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ သင့်ရဲ့မြန်ဆန်စွာသင်ယူနိုင်စွမ်းကိုလူသိများသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ရှေ့နောက်မညီမှုရှိခြင်းအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။
သငျသညျတစျခုအရာကပ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများစွာကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူငယ်ချင်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားမှာ Libra နှင့် Aquarius ကဲ့သို့သောအခြားလေယာဉ်လက်မှတ်များအတွက်ဖြစ်သည်။
သင်နှင့်တူသောသူများကိုတွေ့ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်ကျိန်းသေဖြစ်သည်။ သင်၌လည်းအလားတူအကျိုးစီးပွားများရှိနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ Hangouts များသည် ပို၍ ပင်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ကင်ဆာ, ဒီလနိမိတ်လက္ခဏာကိုအလွန်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်လူသိများသည်။
တခြားသူတွေနည်းနည်းလုပ်ပေးတဲ့နည်းနဲ့တခြားသူတွေကိုသင်ခံစားရတယ်။ အချို့လူများကသင်၏ခံစားချက်များကိုနားမလည်နိုင်သဖြင့်ဤအရာသည်ပြinနာများစွာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီအတွက်ကြောင့် Scorpio နှင့် Pisces ကဲ့သို့သောအခြား watermark များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သူတို့သည်သင့်ကိုနားလည်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ အခြားသူများမဟုတ်သည့်အခါသင်နားထောင်လိုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကင်ဆာသည်ကမ္ဘာကြီးကို၎င်း၏ပခုံးပေါ်တင်ထားသကဲ့သို့ခံစားရသည်။
သူတို့သည်အခြားသူများ၏ပြproblemsနာများကိုသယ်ဆောင်နေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းသည်သင်အကျိုးရရှိသည်။ ဤမီးသင်္ကေတသည်ဖန်တီးမှုဖြစ်ပြီးယင်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချသည်။
သို့သော်ဆည်းကပ်က၎င်း၏စျေးနှုန်းရှိပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာလီယိုသည်သူတို့၏လူသားချင်းလက်တဆုပ်စာမျှဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ခေါင်းမာမှုကသူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာမကောင်းဘူး။
ဤအကြောင်းကြောင့်သင်သည် Aries နှင့် Sagittarius ကဲ့သို့သောအခြားမီးသင်္ကေတများနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်လည်းယုံကြည်မှုရှိပြီးပွင့်လင်းမှုရှိသည်။ သငျသညျအနုပညာသို့ရောက်နေလျှင်, ဤဆိုင်းဘုတ်များနှစ်ကြိမ်အဖြစ်အသုံးဝင်ပါသည်။
သင်၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်တူကြောင်းသင်သိကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများလည်းအတူတကွကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ကြသည်။ ပျော်ဖို့ဘယ်လိုနေလဲသိလား
ဤမိတ်ဖွဲ့မှုမျိုးသည်ရာသက်ပန်အမှတ်တရများဖန်တီးပေးသည်။ ရွေ့လျားနေသည် ...
Virgo၊ အကယ်၍ မာကျူရီအုပ်ချုပ်သောဤကမ္ဘာနိမိတ်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါက၊ သင်သည်အလွန်အလုပ်ကြိုးစားပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်သည်။ အပျိုကညာသည်အလွန်ဂရုတစိုက်လှုပ်ရှားသည်။ ခင်ဗျားတို့လည်းအရမ်းသစ္စာရှိသူတွေပါ။
သို့သော်သစ္စာရှိမှုသည်အမြဲတမ်းဆုချခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့ဆိုလျှင်ထိုသစ္စာစောင့်သိမှုကိုတန်ဖိုးထားတတ်သူတစ် ဦး ကိုသင်လိုချင်သည်။ အခြားကမ္ဘာမြေနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်အေးမြနေစဉ်, သင်လည်း Scorpio နှင့်အတူအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့သည်ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝပြီးသူတို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသည်းအသန်ရှိသည်။ ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံရေးမျိုးကအသုံးဝင်ပါတယ်။ သူ၏ရိုးသားမှုကိုမလိုအပ်သည့်တိုင်အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်သင့်အားသူကူညီနိုင်သည်။
Libra, ဒီလေကြောင်းနိမိတ်လက္ခဏာကိုတ ဦး တည်းအရာကြိုက်လျှင်, ကုမ္ပဏီရှိသည်ဖို့ပါပဲ။ အခြားလေကြောင်းသင်္ကေတများသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးရွေ့လျားရန်လွယ်ကူသော်လည်း၎င်းသည်သင့်အတွက်မကောင်းပါ။ သင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုသင့်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာလမ်းပြပေးစေချင်တယ်။
Sagittarius နှင့် Leo တို့လိုမီးသင်္ဂြိုဟ်မှုတွေကဒီနေရာမှာရောက်နေတယ်။ မင်းဘဝမှာပျော်စရာကောင်းအောင်သူတို့လုပ်ပေးတယ်။ Leo နှင့် Sagittarius တို့သည်ပျော်စရာကောင်းပြီးစွန့်စားခန်းများဖြစ်သည်။
ပါတီကိုဘယ်လိုဆက်ထိန်းထားမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။ ဤသည် Libra လိုချင်သောအတိအကျဖြစ်သည်၊ မိတ်ဆွေများကသူတို့ကိုကောင်းကောင်းအချိန်ပေးပြီးအပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ Libra သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အခက်တွေ့လေ့ရှိသည်။
ဤမိတ်ဆွေသစ်များသည်သင့်အကျိုးစီးပွားကို ဦး စားမထားပဲသင့်အားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ညွှန်ပြနိုင်သည်။ Scorpio, ဒီရေစာအမှတ်အသားများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်အားထက်သန်သည်။ သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေထဲမှာသာမကအခြားလူတွေဆီကိုပါ။
Capricorns တွင်လည်းအလားတူလက္ခဏာများရှိသည်။ ဒါကြောင့်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအတူတူနေကြမယ်။ Capricorn များသည်အလွန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
သင်တစ်ခုခုလိုအပ်သည့်အခါသင်မှီခိုအားထားရသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ထူးခြားသောအခြားတစ် ဦး နှင့်အတူအားလပ်ရက်တွင်သွားနေပြီးခွေးအားကျွေးမွေးရန်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလိုအပ်သည်ဟုပြောပါ။ Capricorn လူများသည်အချိန်မရွေးလုပ်လိမ့်မည်။
သင်ခွေးကိုကျွေးမွေးရန်သူတို့ကိုသင်အားကိုးရုံသာမကသင်မေ့နေသောအပင်တစ်ပင်ကိုသူတို့ရေလောင်းပေးလိမ့်မည်။ Capricorn သည်လည်းသင်၏အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရွေ့လျားနေသည်။ သူတို့အချိန်ကိုဘယ်လိုခွဲခြားရမယ်ဆိုတာသိတယ်။
သင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုအလေးအနက်ထားသောကြောင့်၊ Capricorns သည်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကိုနီးပါးသတ်မှတ်သည်။ ငါတို့မသွားခင်မှာမင်းကနုပျိုလာအောင်ကြိုးစားနေသလား။ ကောင်းပြီ, သင်သည်သင်၏အစားအစာနှင့်အတူစတင်သင့်ပါတယ်။
သင်၏အသားအရေကိုနုပျိုစေသည့်အစားအစာ ၁၃ ခုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ယခုအကောင်းဆုံး BFFs ပြုလုပ်သောရာသီခွင်လက္ခဏာများအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းသို့ပြန်သွားပါ။ Sagittarius Sagittarius အလွန်စွန့်စားမှုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျလာမယ့်ပျော်စရာအရာအဘို့အလိုက်ရှာအပေါ်အမြဲပါပဲ။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်သည်သင်၏မီးသင်္ကေတလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Aries နှင့် Leo နှင့်သင့်တော်လိမ့်မည်။ မင်းဟာအုပ်စုကောင်းတစ်ခုပါ
သင်၏သူငယ်ချင်းများသည်သင်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေသင့်သည့်လူများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်သဘောပေါက်ပြီးပျော်မွေ့ပါ။ ဤသည်ရာသီခွင်၏မီးသင်္ကေတအဘို့အအသက်ရှင်သောအရာဖြစ်တယ်။
ပါတီပွဲဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားတွင်အားလပ်ရက်ဖြစ်စေဖြစ်စေ Sagittarius သည်အရာရာတိုင်းကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ကြည့်ချင်သည်။ ဤအရာသည်သင်လီယိုနှင့် Aries နှင့်တူညီသည်။ ခင်ဗျားရဲ့နေရာကိုဘယ်အချိန်ပေးရမယ်ဆိုတာသိတဲ့မင်းရဲ့ခင်မင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကဒီမှာပါ။
အကယ်၍ မင်းကညဥ့်နက်မှရိုက်နှက်ခံရပြီးဒုတိယအကြိမ်ကစားခြင်းကိုမခံစားရဘူးဆိုလျှင်သင်၏ကန့်သတ်ချက်များကိုသင်လေးစားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရင့်ကျက်ခြင်း၏အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီးသင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှအရေးကြီးသည်။ ငါအစောပိုင်းကပြောခဲ့သကဲ့သို့, Capricorn အလွန်တာဝန်ရှိသည်။
သငျသညျအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမှာအကြီးပါပဲ။ သူတို့မှာအလုပ်တစ်ခုရှိရင်၊ ကြို့ထိုးခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းလုပ်ချင်ကြတယ်။ ဤအရာကြောင့်သူတို့သည်ကင်ဆာရောဂါကိုကောင်းစွာကုသနိုင်ကြသည်။
Capricorn နှင့် Cancer အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုသည်အဆင့်များစွာတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ Capricorn ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးကင်ဆာရောဂါသည်အလွန်ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဤအရည်အသွေးများရောနှောမှုသည်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်မှုတွင်ကြီးမားသောမိတ်ဖက်များဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကင်ဆာသည်တစ်ခါတစ်ရံသင့်အတွက်အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုမှာသူတို့ဟာသင်ဖွင့်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ Aquarius၊ အကယ်၍ ဤအရာသည်သင်၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါကသင်သည်အလွန်လွတ်လပ်ပြီးတိုးတက်သည်။
အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့သူဟာသင်အမြဲတမ်းလူတစ်ယောက်ပါ။ သို့သော်၊ ဤအရာသည်အခြားသူများအတွက်သာမကကိုယ့်အတွက်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤသည် Sagittarius လာနေရာဖြစ်သည်။
Sag သည်ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းပြီးစွန့်စားခန်းလုပ်နေသည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ မင်းကမင်းရဲ့ဘဝကိုစွန့်စားမှုအနည်းငယ်ယူလာပေးတယ်။ လူတိုင်းပျော်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား? Pisces, ဒီရေစာမှတ်သည်သင်၏အနုပညာဘက်နှင့်အမြဲအဆက်အသွယ်ရှိသည်။
ဒါကသူတို့ကသူတို့ရဲ့သနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့် sensitivity ကိုဖော်ပြပုံဖြစ်ပါသည်။ သင်က Pisces ဖြစ်တဲ့အခါသင့်ကိုနားလည်ပြီးခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာသင်နဲ့အတူနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုလိုချင်တယ်။ ဒါကြောင့် Taurus ဟာဆင်ခြေလျှောတစ်ခုပါ။
Taurus သည်စိတ်ရှည်သည်။ မင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမင်းယုံတယ် သူတို့ကအရမ်းကိုစိတ်ချရတယ်။
သင့်မှာပြhaveနာတစ်ခုရှိရင်သင်သူတို့ကိုလာနိုင်ပါတယ်။ မင်းတို့ကိစ္စတွေကိုမင်းအမြဲတမ်းအမှုဆောင်နေတာကိုး။ Taurus သူအလွန်မှဆက်ကပ်အပ်နှံကြောင်းတာဝန်များကိုရှိပါတယ်။
ဟုတ်တယ်၊ ရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာကအရူးပဲ။ မင်းကိုဘာတွေများယူဆောင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာမင်းဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူး။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့်အခြားဆောင်းပါးအချို့ကိုသင်၏ပြီးပြည့်စုံသောရာသီဥတုအခြေအနေပွဲစဉ်တွင်ကြည့်ပါ။ မင်းရဲ့အဆိုးဆုံးရန်သူတွေကမင်းရဲ့နိူင်ငံနိမိတ်လက္ခဏာကိုအခြေခံပြီးကော။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကြည့်ပါ။
မင်းရဲ့နိူင်ငံနိမိတ်လက္ခဏာကိုအခြေခံပြီးသင်ဘယ်သူ့ကိုအခြေခံတယ်ဆိုတာပိုမိုလေ့လာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်သံလိုင်းကိုနှစ်သက်ရန်နှင့်စာရင်းသွင်းရန်မမေ့ပါနှင့်။ ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သမျှသည်သင်သို့မဟုတ်သင်၏ BFF နှင့်သက်ဆိုင်ပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ!
TO သို့ကAprilပြီလ ၂၀ ရက်မှမေလ ၂၀ ရက်အကြားမွေးနေ့ကျင်းပသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ကြိုက်တယ်သူတို့ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့နွားကိုအသိဉာဏ်ရှိ၊ အားကိုးတတ်တယ်၊ ကြိုးစားအားထုတ်တယ်၊ သို့သော်မျက်စိနှင့်တွေ့ဆုံသည်ထက် Bull ပိုမိုရှိပါတယ်။၃ ။ 2020 ။
Taurus လူ။ မင်းကဘာနဲ့တူလဲ Taurus အမျိုးသားများသည်နှလုံးသားကြီးကြီးရှိသောကမ္ဘာပေါ်တွင်အခက်ခဲဆုံးယောက်ျားများဖြစ်သည်။ သူတို့မှာမိန်းမတွေကိုမခံနိုင်လောက်အောင်လုပ်တဲ့အရည်အသွေးတွေအားလုံးရှိတယ်။ Taurus Man ၏ယုံကြည်မှုကိုရယူရန်အချိန်များစွာလိုအပ်သော်လည်းသူသည်သင့်ကိုယုံကြည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူသည်သင်နှစ်သက်သောအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လိမ့်မည်။
Lifesolver မှကြိုဆိုပါ၏။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Taurus Man ကိုကြည့်နေသည်။ Man on နှင့်သူတို့ကဲ့သို့ဖြေပါ? ဤကဲ့သို့သောအပတ်စဉ်ဆောင်းပါးများကိုယနေ့ရယူရန်မမေ့ပါနှင့်! Taurus အမျိုးသားများသည်သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးတွင်အတော်အတန်စဉ်းစားတတ်ကြသောကြောင့်သူတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများတွင်အောင်မြင်မှုရှိကြသည်။ သို့သော်ဤအပြုသဘောဆောင်သောစရိုက်များအားလုံးနှင့်အတူအနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောလက္ခဏာအချို့သည် Taurus လူနှင့်ပေါင်းသင်းရန်ခက်ခဲစေသည်။
အထူး Taurus လူရှိပါသလား မင်းဘ ၀ မှာမင်းရဲ့မျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့လား။ အရာဝတ္ထုတွေကိုမမြန်ခင်သူ့အကြောင်းသိတာကပိုကောင်းတယ်။ လူတစ် ဦး ၏ကောင်းကျိုးနှင့်မကောင်းသောအရည်အချင်းများကိုကြိုတင်သိရှိထားခြင်းကသင့်အားသီးခြားခွဲထားသည့် Ta Urus ယောက်ျား၏အပြုသဘောဆောင်သောအရည်အသွေးများကိုသင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုမည်နည်း။ Taurus ယောက်ျားသည်ဂရုစိုက်တတ်သူ၊ ချစ်ခင်တွယ်တာသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးချစ်ရသူများကိုမည်သို့ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရမည်ကိုသိသည်။ သူတို့ဟာအမြဲတမ်းဘဝမှာသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေပြည့်မီဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေပါ။
ဒီရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ၏ယောက်ျားအတော်လေးရည်မှန်းချက်ကြီးဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထိုက်ထက်လျော့နည်းဘာမှများအတွက်အခြေချဘယ်တော့မှမ။ ထိုအရာများက၎င်းတို့ကိုသူတို့၏ဘဝတွင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပြီးအောင်မြင်စေသည့်အခြားအပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာများမှာ - * Taurus အမျိုးသားတစ် ဦး သည်ခေါင်းမာသည်။ ၎င်းသည်အခြားရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာများရှိလူများအတွက်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်း Taurus-Man သည်၎င်းတို့အားသူတို့၏စွမ်းအားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သူ၏အနေအထားကိုတူးဆွ။ ကိုင်ထားနိုင်ခြင်းသည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင်သူကိုအောင်မြင်မှုရစေသည်။ * Taurus အမျိုးသားတစ် ဦး သည်စူပါသစ္စာ ရှိ၍ ရက်ရောသည်။ ရက်ရောမှုနှင့်သစ္စာရှိမှုအတွက် Zodiac နိမိတ်လက္ခဏာသည် Taurus ယောက်ျားများကိုမနိုင်ချေ။ သင်သည်သင်၏ယုံကြည်မှုရရှိပြီးသည်နှင့်သင်၌ထူထပ်။ ပိန်ပိန်ပါးပါးနေသည့်သူ၌သင်၌သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသည်။
သူတို့၏ကြီးမားသောနှလုံးသားသည်မည်သူ့ကိုမျှသစ္စာဖောက်။ နာကျင်စေမည်မဟုတ်ပါ။ Taurus လူတစ် ဦး သည်သူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်မည်သည့်ဆက်ဆံရေးတွင်မဆိုကောင်းသောပံ့ပိုးသူဖြစ်သည်။ သူချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်ကိုသူသိသည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကိုတန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်များဖြင့်ရေချိုးခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုအထူးခံစားစေသည်။
မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုသူတို့၏အမှောင်မိုက်ဆုံးအချိန်များတွင်ငွေရေးကြေးရေးအရကူညီပေးသည်။ Taurus လူ၏ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။ သည်အခြားရာသီခွင်လက္ခဏာများကဲ့သို့ Taurus လူ၌လည်းကောင်းသည့်လက္ခဏာများအပြင်အနုတ်လက္ခဏာစရိုက်များရှိသည်။ ဤအရာသည် Taurus အမျိုးသားများအတွက်အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာနှင့်၎င်း၏အဖုံးများနှင့်ရှုပ်ထွေးလေ့ရှိသည်။
Taurus လူတစ်ယောက်အတွက်တော့အသွင်အပြင်ဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးဆုံးပဲ။ သူသည်လူတို့ကိုသူတို့၏အသွင်အပြင်နှင့်အဝတ်အစားအားဖြင့်မကြာခဏစီရင်တတ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်အပြင်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏ရှုထောင့်များစွာမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သင့်သည်။
ဒီအနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာက Taurus လူတစ်ယောက်အတွက်တကယ့်ဘဝပြproblemsနာတွေဖြစ်စေတယ်။ Taurus လူတစ်ယောက်သည်ရုပ်ဝါဒဆန်သည်။ Taurus လူအတွက်ငွေကြေးနှင့်အောင်မြင်မှုသည်သူ့ဘဝတွင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ သူကဇိမ်ခံစရာမလိုဘဲသာမာန်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအသက်မရှင်နိုင်ပါ။
Taurus လူ၏ဘ ၀ သည်ဇိမ်ခံခရီးသွားခြင်း၊ စျေးကြီးသည့်ဟိုတယ်များတွင်ညစာစားပွဲများနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ Taurus Man: Friendships Taurus ယောက်ျားကသူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်၊ သစ္စာရှိပြီးသူတို့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့ပဲ။ သူတို့ကသူတို့၏သူငယ်ချင်းများမည်မျှရှိသည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်မဟုတ်သော်လည်းသူတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောအရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်များကိုသတိရခြင်းဖြင့်သူတို့၏တန်ဖိုးထားမှုကိုပြသကြသည်။
သူငယ်ချင်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Taurus လူတစ်ယောက်သည်သူနှင့်အတူတူပင်ကြွယ်ဝသောလူနေမှုပုံစံကိုအတူတူနေထိုင်သူများကိုအမြဲတမ်းပိုနှစ်သက်သည်။ သူကလူသစ်တွေကိုယုံကြည်ဖို့အချိန်အများကြီးယူတယ်၊ ဒါကြောင့်သူငယ်ချင်းသေးသေးလေးတွေရှိတယ်။ Taurus လူတစ်ယောက်ကသူတို့သူငယ်ချင်းများကိုသူတို့စိတ်ထဲစွဲမှတ်သွားသောအခါသူ့သူငယ်ချင်းများကိုခေါ်နိုင်သည်။
Taurus လူတစ်ယောက်နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ရခြင်း၏အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာသင်သူ့ကိုအများဆုံးလိုအပ်ချိန်တွင်သူသည်သင့်အတွက်အမြဲရှိနေသည်။ သင့်တွင်ကျောက်ကဲ့သို့ရပ်။ သင့်အားအဆုံးတိုင်အောင်ခုခံကာကွယ်မည့်သစ္စာရှိသောမိတ်ဆွေတစ် ဦး ရှိသည်။ Taurus Man: Relationships Taurus ယောက်ျားသည်မိန်းမတိုင်းတွင်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများရှိသောကြောင့်သူသည်စုံလင်သောဘဝပါတနာသို့မဟုတ်ချစ်မြတ်နိုးသူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်။ သူချစ်သောသူအားဆက်ဆံရေးတွင်လုံခြုံမှုရှိစေရန်အမြဲဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည်။
သူသည်သူမ၏နှလုံးနှင့်ခံစားချက်များကိုကာကွယ်ရန်သူတတ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော် Taurus လူသည်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်ခေါင်းမာတတ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူ့ကိုသူနှင့်အဆက်အသွယ်တူညီရန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မှသာသင်သူ့ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှစိတ်မပျက်စေရ။ သူဟာအပြင်ထွက်ရတာကိုကြိုက်ပေမယ့်အိမ်မှာတည်းခိုတာနဲ့သူမနဲ့အတူအိပ်ရာပေါ်မှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်။
သူသည်သူမလိုအပ်သောအရာမှန်သမျှကိုသူ၏ဘ ၀ တွဲဖက်ကိုပေးဆပ်ရန်မမောနိုင်မပန်းနိုင်အလုပ်လုပ်နေမည်ဖြစ်သော်လည်းခြွင်းချက်မရှိသောမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်မှုကိုပြန်လည်ရရှိမည် Taurus လူတစ်ယောက်ကသူကြိုက်တာကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူ့ဘဝအဖော်ကသူ့ကိုမပြောင်းလဲဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့စံပြဖြစ်အောင်ပုံသွင်းဖို့မမျှော်လင့်ဘူး။ ဒါဟာ Taurus လူကိုနက်ရှိုင်းစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
Taurus Man: အခြားရာသီခွင်လက္ခဏာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်းသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Taurus အမျိုးသားသည်ကင်ဆာမိန်းမနှင့်အကောင်းဆုံးသဟဇာတဖြစ်သည်။ လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်အနေဖြင့်လိုအပ်သောinityတ္တပ္ပစိတ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုသူပေးနိုင်သည်။ Taurus ယောက်ျားအတွက်နောက်ထပ်ကောင်းသောမိတ်ဖက်တစ် ဦး မှာအပျိုကညာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သူမသည်သူမ၏ဘဝတွင်ငွေရေးကြေးရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်သစ္စာရှိမှုတို့ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ Capricorn အမျိုးသမီးများသည် Taurus အမျိုးသားတစ် ဦး အတွက်အကောင်းဆုံးသောပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ Capricorn အမျိုးသမီးများ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အလုပ်ကြိုးစားသူသည် Taurus လူနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ သို့မှသာအတူတကွပညာရှင်ပီသစွာရော၊
Taurus အမျိုးသားတစ် ဦး သည် Pisces အမျိုးသမီးနှင့်အလွန်သဟဇာတဖြစ်စေနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာသူသည်ပညာရှိသောသူ၊ Pisces အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းသည် Taurus အမျိုးသားတစ် ဦး အတွက်လေကောင်းလေသန့်ရှူခြင်းနှင့်တူသည်။ သူမတွင်သူရှာဖွေနေသောဉာဏ်ပညာ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့်အပြစ်ကင်းစင်မှုတို့ပါ ၀ င်သည်။ Taurus လူကိုသင်နှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာဘယ်လိုသိရသလဲ Taurus လူတစ်ယောက်ပထမ ဦး ဆုံးစတင်ဖို့ခက်ခဲပေမယ့်သူကသဲလွန်စတွေကိုသူဆက်ထားမယ်။
သို့သော်၊ ဤမှတ်စုများသည်ဖတ်ရန်ခက်ခဲပြီးအလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။ Taurus လူတစ်ယောက်သည်သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးမည်ဟူသောလက္ခဏာအချို့မှာ - သူသည်သင့်အားပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှက်ကြောက်နေလိမ့်မည်။ သူနှင့်သင်၏အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။ ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုပြုရန်သူကြိုးစားလိမ့်မည်။ သူကသူရဲ့ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်အရသူဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဘက်ကိုပြလိမ့်မယ်။ Taurus လူဟာဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးရာသီဥတုလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ Taurus လူတစ်ယောက်သင့်အနားမှာရှိခြင်းသည်သင့်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်၊ သူသည်သူသည်စူပါအထောက်အကူပြု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသူဖြစ်သည်။
လူအချို့က Taurus အမျိုးသားများသည်စောင့်ရှောက်ရန်ခဲယဉ်းသည်ဟုထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်မမှန်ပါ။ သင်၏အပြုအမူ၊ သင်မည်သို့ပြုမူသည်၊ Taurus လူတစ်ယောက်သည်သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါကထိုပင်ကိုစရိုက်ကိုထိန်းသိမ်းကာသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချပါ။ Taurus ယောက်ျားစူပါသစ္စာစောင့်သိဖြစ်ကြပြီးသူတို့သည်သူတို့နိုးနှင့်သင့်ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုအခွင့်အလမ်းတော်တော်လေးအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ချစ်စရာကောင်းသောအိမ်ကိုတည်ဆောက်ပြီးသာယာဝပြောသည့်ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသင်ရှာဖွေနေပါက၎င်းတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် Taurus လူနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ ဤကဲ့သို့သောအပတ်စဉ်ဆောင်းပါးများကိုကြိုက်နှစ်သက်ရန်၊ မျှဝေရန်နှင့်စာရင်းသွင်းရန်မမေ့ပါနှင့်!
သူတို့ဆက်ဆံရေးသည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုတန်ဖိုးထားသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်,ကဖို့အနှေးကွေးရာသီခွင်ဆိုင်းဘုတ်များတစ်ခုဖြစ်သည်ချစ်မိခြင်း။ ''ကသူတို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တဲ့လက်တွဲဖော်လိုတယ် 'ဟုအသိအမှတ်ပြုဗေဒင်ပညာရှင် Kyla Derkach က Bustle ကိုပြောကြားခဲ့သည်။၁၂ ။ 2021 ။
မေလကလေးများတစ်ခုခုကို Taurus (20ပြီ ၂၀-မေလ၂၀) သို့မဟုတ် Gemini (မေလ၂၁ ဇွန် ၂၀) ကမ္ဘာမြေတစ်ခုသို့မဟုတ်လေကြောင်းသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ Taurus tots ကမ္ဘာမြေကဲ့သို့တည်ငြိမ်ဖြစ်လေ့ရှေးရိုးစွဲဖြစ်သစ္စာစောင့်သိ။ Taurus တွန်းသောအခါ Level- ခေါင်းစဉ်ပေမယ့်မီးကလေးသူငယ်များသူတို့ကြီးထွားလာသည်နှင့်ကျောင်းလုပ်သားအင်အားတွင်လည်းကောင်းလိမ့်မည်။၃၀ 2019 ။
TO သို့ကကျသွားတယ်အလွယ်တကူချစ်ပါဆက်ဆံရေးဟာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသည့်အခါ။ ကမ္ဘာမြေနိမိတ်လက္ခဏာအရ၊ကလက်တွေ့ကျ, stoic, စိတ်ပိုင်းဖြတ်, ရည်မှန်းချက်ကြီးနှင့်ရုပ်ဝါဒရှိပါတယ်။Taurus ပါဘူးခေါင်းမာသောအရာများ၌မူများသော်လည်း၊ သူတို့နှင့်အဆင်ပြေသောလူများကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာဆက်ဆံနိုင်သည်။၂၈ 2020 ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊က'အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်အခြားဖြစ်လိမ့်မည်ကတစ် ဦး ကင်ဆာ, Capricorn တစ် ဦး Scorpio, ဒါမှမဟုတ် Pisces ။ သူတို့ရှောင်ကြဉ်သင့်သည့်လက္ခဏာများမှာ Sagittarius နှင့် Aquarius တို့ဖြစ်သည်။ဆယ့်ငါး 2021 ။
အဘယ်ကြောင့် Taurus အဆိုးဆုံးရှိပါသလဲ
ကကျိန်းသေနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အခက်ခဲဆုံး Zodiac ဆိုင်းဘုတ်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကအခြားနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အတူရုန်းကန်နေရသောအရာများစွာနှင့်ရုန်းကန်နေရသည်။ ခေါင်းမာခြင်းနှင့်ခံစားချက်များကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။aနှင့်မကိုက်ညီသောလက္ခဏာအချို့ကလီယိုနှင့် Aquarius ဖြစ်ကြသည်။ဆယ့်ငါး 2019 ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောရရင် Taurus အရမ်းလှတယ်၊သူတို့ကဒါအရမ်းအချည်းနှီးဖြစ်သော်လည်းသေးဒါရင်ခုန်စရာ။ သင်၏အသက်တာသည်အနတ္တနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်နေသည့်အခါသင်၏အပြင်ဘက်တွင်ထိပ်တန်းအဆင့်ရောက်ရှိနေကြောင်းသေချာစေရန်သင်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်မခဲယဉ်းပါ။ သင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်နက်နဲနဲသိသော်လည်းသင် Aquarius နှင့်ဘယ်တော့မှနှိုင်းယှဉ်မည်မဟုတ်ပါ။၇ ။ 2020 ။
မေလ ၁၀ ရက်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး horoscope ကဘာပြောသလဲ။
မေလ ၁၀ ရက်မွေးနေ့ဆန်းစစ်ချက်အရယနေ့တွင်မွေးဖွားသူများသည်အကောင်းမြင်သူများဖြစ်ကြသည်။ မေလ ၁၀ ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်မှာသင်ဟာချစ်ခြင်း၊ သင်ပိုင်ဆိုင်သောသဘာဝနှင့်အေးမြသောစိတ်ခံစားမှုများသည်တူညီသောရာသီဥတုလက္ခဏာအောက်တွင်မွေးဖွားလာသူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကျော်ကြားတဲ့လူတချို့ကဘာတွေလဲ။
မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Taurus တစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းဟာချစ်စရာကောင်းပြီးလိမ္မာပါးနပ်တဲ့သူတစ်ယောက်လို့လူသိများပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်သင်သည်သင်၏လူတို့၏ဟာသဉာဏ်နှင့်ထူးခြားသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုလူတို့နှစ်သက်ကြောင်းသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။
မေလ ၁၀ ရက်ရာသီဥတုနိမိတ်သည်ဗီးနပ်စ်နှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။
မေလ ၁၀ ရက်နိမိတ်လက္ခဏာသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနတ်ဘုရားမဖြစ်သော Venus နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မာကျူရီကသင့်အားဆက်သွယ်မှုနှင့်ဖော်ရွေသောစိတ်ဓာတ်ကိုပေးသည်။ Venus ကသင့်အားအခြားသူများကိုချစ်ရန်စွမ်းရည်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤထူးခြားသောဆက်ဆံရေးကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖော်ရွေသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။